လိမ်ဖို့ အတွက် မွေးကတည်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လိမ်ဖို့ အတွက် မွေးကတည်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတွေ
လိမ်ဖို့ အတွက် မွေးကတည်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတွေ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Jan 6, 2012 in Copy/Paste, Other - Non Channelized | 10 comments
ဖွတ်ကြားကော်မရှင် လိမ်တဲ့ နေရာ သူများက လိမ်တယ်ဖြစ်ရော
ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့
၂၀၁၂ ခု၊ဇန်နဝါရီလ (၂)ရက်နေ့ မှာနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေကနေ တရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့ အားရဝမ်းသာဖြစ်ရမယ့်အစားဗျာ စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ပုဒ်သွားဖတ်မိပြန်ပါရော။တခါမှကို စိတ်ဝင်တစားမဖတ်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေပါ။စာရေးတဲ့သူက“ရန်ကြီးအောင်”၊ခေါင်းစီးက“အားသစ်မာန်သစ်-နိုင်ငံသစ်”ပါတဲ့။ရေးထား၊ပြောထားတာတွေအားလုံးကတော့ စာရွက်ပေါ်မှာတော်တော်လေး ကောင်းတယ်ဗျာ။လက်တွေ့ လူမှု ဘဝတွေမှာတော့ဖြင့်……??
“ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတို့ ၏အခွင့်အရေးနှင့်
ပတ်သက်၍ အကာအကွယ်ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကို ဖွဲ့ စည်းပေး
ခဲ့သည်မှာ မှတ်သားဖွယ်ကောင်းသော လုပ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။အာဆီယံအသင်းဝင် ဆယ်နိုင်ငံ
အနက် လွတ်လပ်သော လူ့ အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ အစည်းရှိသည့် နိုင်ငံ(၅)နိုင်ငံသာရှိပြီး ယင်းတို့ အနက် မြန်မာအမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံ
တကာစံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပဲရစ်အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အညီ ဖွဲ့ စည်းထား
သည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည်”ဆိုပါလား ရွာသူားတို့ ရေ။
“မြန်မာအမျိုးသားလူ့ အခွင့်အရေးကော်မရှင်မှာ နိုင်ငံတကာစံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည့် ပဲရစ်အခြေခံသဘောတရားများနှင့်အညီ ဖွဲ့ စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ အဖွဲ့ အစည်းဖြစ်သည်”ဟုတ်တော့ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုစံတွေနဲ့ ညီတယ်မညီဘူးပြောနေမယ့်အစား ကော်မရှင်ရဲ့ ရပ်တယ်မှုက သူ့ ရဲ့ စံကို
ကော်မရှင်ကနေ ၂၀၁၁ခု၊ဒီဇင်ဘာ(၃၀)ရက်နေ့ ကနိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေကနေ ထုတ်ပြန်ကြေညာတဲ့ ကြေညာစာတမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့“အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်၌ထားရှိသည့် အကျဉ်းသားအရေအတွက်သည် ထားရှိနိုင်သည်ထက် များစွာကျော်လွန်နေကြောင်း၊အကျဉ်း
ထောင်အတွင်း ကျပ်တည်းစွာ နေထိုင်ရမှုသည် အဆင်မပြေမှုများ၏ အခြေခံအကြောင်းတရားဖြစ်သည်”ကို သွားတွေ့ မိ၊တွေးမိပါတယ်။
ကော်မရှင်ကနေ ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ အချက်(၈)ချက်ပါကြေညာစာတမ်းကနေ ကျွန်တော်
က နံပါတ်(၃)၊နံပါတ်(၄)၊နံပါတ်(၅)အချက်တွေကို ထောက်ပြချင်ပါတယ်။ကြေညာစာတမ်းပါ
(၃)အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ မကြာသေးမီက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြသော အကျဉ်းသားများ
ကို“စစ်ခွေးတိုက်”၌ထားကြောင်း နှိပ်စက်မှုပြုကြောင်း၊သောက်ရေကိုပင်မပေးကြောင်းဖြင့် နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ ၏ စွပ်စွဲချက်များကို ကော်မရှင်က လက်ခံရရှိခဲ့သည်။(ဆိုတော့ နိုင်ငံတကာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ က လိမ်နေတယ်ဖြစ်သွားရောပေါ့၊တကယ်က…????)
(၄)သို့ ဖြစ်ရာ အကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်စဉ် မကြာသေးမီက အစာငတ်ခံဆန္ဒပြခဲ့
သော အကျဉ်းသားများအနက်(၃)ဦးကို ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကတွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည်။
(ထိုသုံးဦးသည် အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုနိုင်ရဲ့လား၊သို့ မဟုတ် ဘယ်လို သူမျိုးတွေလဲ…??)
(၅)တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့သော အကျဉ်းသားများအားလုံးက ၄င်းတို့ အား သောက်ရေမပေးဆို
သည်မှာ မဟုတ်မှန်ကြောင်းနှင့် ဆန္ဒပြနေစဉ် နှင့်ဆန္ဒပြပြီး ကာလနှစ်ခုလုံးတွင် ဆေးဝါးပြုစု
စောင့်ရှောက်မှုကိုစီစဉ်ပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားသည်။ထို့ အပြင်“ခွေးတိုက်”၌ထားသည် ဆိုခြင်းမှာလည်း မဟုတ်မှန်ကြောင်းတွေ့ ရှိရသည်။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြသူတစ်ယောက်စီ ကိုသန့်် ရှင်း၍ လေဝင်လေထွက်ကောင်းသော (၁၀)ပေ*(၂၂)ပေ ကျယ်ဝန်းသည့် အကျဉ်းခန်း အသီးသီးတွင် ထားရှိပါသည်။
(ဆိုလိုတာကတော့ နော် နိုင်ငံတကာ လူ့ အခွင့်ရေး အဖွဲ့ က လိမ်နေတာပေါ့။
ခက်နေပီဗျာ. ထောင်တွင်းဆေးကုသမှု ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊မရှိဘူးဆိုတာကို အကျဉ်းသား
မိသားစုဝင်တိုင်း သိပြီး၊ပူပင်ကြောင့်ကြနေကြရတဲ့ ပြဿနာပါ။ဆေးကုသမှုမရလို့ ၊ထောင်
ကတာဝန်ကျဆရာဝန် မလာလို့ သေသွားခဲ့ရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ….???
နောက်ပြီးတော့. အင်းစိန်ထောင်မှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းခန်းတွေအားလုံးဟာ (၈)ပေ*(၁၂)ပေ
အခန်းတွေပါ။ခုတော့ဗျာ နည်းတဲ့အခန်းကြီးတွေလား (၁၀)ပေ*(၂၂)ပေဆိုတာဗျာ။)
အဲဒီတော့ မြန်မာအမျိုးသားကော်မရှင်က ပြောချင်ပြော၊ရေးချင်ရာရေး၊ပေးချင်တဲ့ ထင်မြင်ချက်ပေး၊လုပ်ချင်ရာသာလုပ်၊မတရားခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကသာ လိမ်နေတယ်ဖြစ်ရာဗျာ။အဲဒီတော့ …တဆက်တစပ်တည်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးတဲ့ အမိန့် ကိုရော၊မယောင်ရာဆီလူး၊လိမ်ဆင်တွေကို ကူပြီးကပြပေးနေတဲ့ ဖွတ်ကြား ကော်မရှင်ကို မခံမရပ်နိုင်ပြင်းစွာ ဖြစ်နေရပါကြောင်း ရွာသူားများခင်များ။
အားလုံးနားလည်ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါစေ။ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ တနေ့ ဖြစ်ကြပါစေဗျာ။
ဒီတခေါက်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကတော့တော်တော်လေးကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး။ ဒုတိယအကြိမ်တုန်း ကတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရပါတယ်။ မနက်အစောကြီး eleven media group ကိုဖုန်းဆက်တော့ သူတို့ကလဲစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ဘယ်သူတွေပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ပြန်ဆက်ပါ။ သတင်းမစုံသေးဘူးအစရှိသဖြင့် နဲ့စိတ်တွေလှုပ်ရှားနေရပေမဲ့ဒီတခါတော့အမိန့်ထွက်ကတဲကဘယ်သူတွေပါမယ်၊ အထူးမျှော်လင့်နေတဲ့ သူတွေမပါဘူးဆိုတာကြိုသိနေရတော့လွှတ်သွားလိုက်ကြတာတောင်မသိလိုက်ဘူး။ ကိုယ်တွေတောင် အဲလောက်စိတ်ပျက်ရင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့စိတ်ပျက် မှု့ကတော့ဆိုနိုင်ဖွယ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက်ထားတဲ့တိုးတက်လာပြီထင်ရတဲ့မျှော်လင့်ချက်က လဲမှေးမှိန်သွားသလိုပဲ။ အားကိုးရာမဲ့သွားသလိုပါပဲ။ နောက်တကြိမ်မှာဒီထက်ပိုပြီးစိတ်မပျက်ရပါစေနဲ့လို့မျှော် လင့်ရင်းဆုတောင်းနေပါတယ်.
ဒီတစ်ကြိမ်တော့ အားလုံးသော ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရသူတွေ
လွတ်လာမယ်လို့ မျှော်နေခဲ့မိတာ။ခုတော့ မချင့်မရဲ ဖြစ်သွားရတယ်။စိတ်လဲပျက်
ဟုတ်တယ်. မွေးကတည်းကလိမ်မယ်၊ညာမယ် လူလိမ်ကြီးရယ်
ယုံအောင်ပြောတတ်တယ် လို့ ဘဲ။လိမ်လွန်းအားကြီးတော့ ကိုယ့်ရှုးကိုယ့်
““အင်းစိန်ထောင်မှာ ရှိတဲ့ အကျဉ်းခန်းတွေအားလုံးဟာ (၈)ပေ*(၁၂)ပေ
အဲဒီတော့ မြန်မာအမျိုးသားကော်မရှင်က ပြောချင်ပြော၊ရေးချင်ရာရေး၊ပေးချင်တဲ့ ထင်မြင်ချက်ပေး၊လုပ်ချင်ရာသာလုပ်၊မတရားခံနေရတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကသာ လိမ်နေတယ်ဖြစ်ရာဗျာ။အဲဒီတော့ …တဆက်တစပ်တည်းလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေးတဲ့ အမိန့် ကိုရော၊မယောင်ရာဆီလူး၊လိမ်ဆင်တွေကို ကူပြီးကပြပေးနေတဲ့ ဖွတ်ကြား ကော်မရှင်ကို မခံမရပ်နိုင်ပြင်းစွာ ဖြစ်နေရပါကြောင်း””
ခံစားတွေးရေးထားတာလေး သိပ်ကောင်းပါတယ်။ပြောချင်တာက လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောခွင့်မရှိသေးတာကို ဖော်ပြချင်တာ။
ခုအနေက အရင်ကလို သဲဖြူခင်း၊ရာဇမတ် ကာတဲ့ခေတ်မကုန်သေးဘူးလေ။လာစစ်မယ်ဆိုရင် အားလုံး အိုကေ။ပြန်မယ်လုပ်လို့ အပေါက်ဝရှိသေး
ယနေ့ ခေတ် မှာ ဒီအတိုင်းအတာထိပြောနိုင်လာတာ
ကလဲ ကောင်းတဲ့ ဦးတည်ချက်ပါဘဲ။ကြိုဆိုရမယ်ထင်ပါတယ်။
အင်း လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့လွှတ်ပေးပြီဆိုတော့ ညည သတိထားအိပ်ရတော့မယ် သူခိုး ဂျပိုးတွေ လွတ် လာပြီလေ
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာတော့ ဟုတ်တန်ကောင်း၏။ဒါပေမယ့် သူ့ အမေလင်တွေဘဲရွေးလွှတ်နေတယ်။
အစာငတ်ခံဆန္ဒပြပါတယ် ဆိုမှာ….ဟင်းနော် ဟွင်းးးးး
တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ အကျဉ်းသား သုံးယောက်ဆိုတာ. ဘယ်လိုလူတွေလဲ။
အားမလို အားမရဖြစ်မိလို့ ရေးလိုက်တာသက်သက်ပါဗျာ။ဒီထက်ပိုတဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာကိုမျှော်လင့်မိပါတယ်။
နောက်အကြိမ်တွေမှာ မေတ္တာရှေ့ထားပြီး သက်သာခွင့်လေးပေးမယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာကြမှာပါ။မျှော်သာမျှော်ပေါ်မလာ